ဇန်နဝါရီလ 2016 | 10 ၏စာမျက်နှာ 16 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » ဇန္နဝါရီလ (စာမျက်နှာ 10)
ဟာဝိုင်ယီ PGA Tour အတွက် Sony ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာများဖုံး Sony ကပွင့်လင်း
ဟာဝိုင်ယီ PGA Tour ဖြစ်ရပ်အတွက် 2016 Sony ကပွင့်လင်းအဓိကတိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အားကစားဖြစ်ရပ်များအတွက် HD ကိုထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများကို Sony ရဲ့ရှည်လျား-running အစဉ်အလာကိုဆက်လက် Sony ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာများ အသုံးပြု. ဂေါက်သီး Channel ကိုအပေါ် HD မှာပစ်ခတ်ထုတ်လွှင့်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲကိုလည်း 4K တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုနှင့်အသံလွှင့်အတွက်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မြေပြင်သည်။ မျိုးစုံ Sony က HDC အပြင် ...
Soliton စနစ်များ - လတ်တလောနယူးဖောက်သည်တွေနဲ့နယူးဥရောပဌာနချုပ်!
အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန် - 12 ဇန်နဝါရီလ 2016 - Soliton စနစ်များ, Real-time encoding ကကိုအခြေခံသောကင်မရာတစ်ခုထူထောင်ဂျပန်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်မိုဘိုင်းကွန်ရက်ကျော် streaming 3G / 4G ဗီဒီယိုကိုအသကျရှငျအသစ်တစ်ခုဥရောပအရောင်းနှင့်ထောက်ခံမှုရုံးကြေငြာလိုက်သည်။ ဂျပန်အတွက်၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်ခန့် 500 ကျော်လူတို့နှင့်အတူအဆိုပါနည်းပညာကုမ္ပဏီ, အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်အတွက်၎င်း၏ပထမဆုံးဥရောပရုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ Soliton စနစ်များထုတ်လုပ် ...
Foccus ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် Soliton သည့်ရီယို 2016 အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲမှာစမတ်-ရုပ်သံလိုင်းကို Zao ငှားရမ်းအစီအစဉ်ကိုကြေညာ
Foccus ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် Soliton သည့်ရီယို 2016 အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲမှာတီဗီထုတ်လွှင့်မှုအတွက်စမတ်-ရုပ်သံလိုင်းကို Zao ငှားရမ်းအစီအစဉ်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါငှားရမ်းအစီအစဉ် Zao H.265 မိုဘိုင်းအန်ကုဒ်, HD ကိုကြည့်ရန်ဆော့ဖ်ဝဲ, ခြောက်လ 4G ဒေသခံ modems နဲ့ site ပေါ်တွင်ယုံကြည်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအပါအဝင်ပြည့်စုံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ခံမှုအထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစမတ်-ရုပ်သံလိုင်းကို Zao ကျယ်ကျယ်ဘရာဇီးအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ပြီးအောင်မြင်ထားပါတယ် ...
ထုတ်လုပ်သူများလက်ထောက် - အပြာရောင်က Sky စတူဒီယို
ထုတ်လုပ်သူများလက်ထောက် (အပြာရောင်က Sky စတူဒီယို)
2016 Latinovator Award ဆုလက်ခံမှ Tyler Perry Studios ကသမ္မတဦးသိန်းစိန်
Tinseltown ထိပ်တန်းအလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် Tyler Perry စတူဒီယို၏သက်တမ်းကြာနိုငျငံတျောသမ်မတဦးဖြစ်လာမယ့်ဟောလိဝုဒ်လုံခြုံရေးအစောင့်အဖြစ်နှိမ့်ချအလုပ်မှထတဲ့သူ Ozzie Areu တစ်ကျူးဘား-အမေရိကန်, Hispanicize 2016 မှာ Latinovator Award ဆုနှင့်အတူဂုဏ်ပြုပါလိမ့်မည်။ Hispanicize 2016, ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူး, ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူ, သတင်းစာဆရာများ, စျေးကွက်, သြဇာများနှင့်ဂီတအနုပညာရှင်တွေများအတွက်သတ္တမနှစ်ပတ်လည်လက်တင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအဖြစ်အပျက်, ပါလိမ့်မယ် ...
DPA မိုက်ခရိုဖုန်းဃတိုးချဲ့: Mount အသုံးအဆောင်ရွေးချယ်စရာနယူးလိုင်းနှင့်အတူ™စာရွက်စာတမ်းမိုက်ခရိုဖုန်းယခုအသစ်သုံးမျိုးတူရိယာကလစ်များပါဝင်သည် Vote နောက်ထပ် DPA ရဲ့တိုးမြှင့် LONGMONT, CO, ဇန်နဝါရီ 14, 2016 ချဉ်းကပ် '' တစ်ဦးမိုက်ခရိုဖုန်းအားလုံးကိုက်ညီ '- DPA မိုက်ခရိုဖုန်း၎င်း၏လိုင်းတိုးချဲ့ဖို့ဆက်လက် ဃ: သုံးမတိုင်ခင်ဘယ်တော့မှ-ရရှိနိုင်ပါတောင်ပေါ်မှာရွေးချယ်စရာများထို့အပြင်နှင့်အတူ™စာရွက်စာတမ်းမိုက်ခရိုဖုန်းကိုမဲပေး - တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ခိုင်ခံ့အတူ Clamp တောင်ပေါ်မှာ ...
ဝေဟင်မှကင်မရာစနစ်အဘို့ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ် မှစ. FlyCam အမေရိကန်နိုင်ငံအသုံးချစိတ်တိုင်းကျ Single-Fiber ဖြေရှင်းချက်
နိုင်းမြစ်, မကျန်းမမာ - ။ ဇန်နဝါရီလ 14, 2016 - ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ် (Je), အထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်တစ်နေရာတည်းမှာဆိုင်, ယောသပ် Fiber Solutions (JFS), ဖိုင်ဘာရပ်စဲခြင်းနှင့်ထုံးစံဖိုင်ဘာဖြေရှင်းချက်၏ပံ့ပိုးပေးတစ်ဦးပေါင်းစပ်ဖန်တီးခဲ့ကြ, မြန်နှုန်းမြင့်, ဝေဟင်-ကင်မရာထုတ်လုပ်သူ FlyCam အမေရိကန်နိုင်ငံများအတွက် Single-ဖိုင်ဘာဒေတာ-ဂီယာဖြေရှင်းချက်။ JFS ရဲ့ထုံးစံဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူ, FlyCam အမေရိကန်နိုင်ငံအပေါ်ပြန်နှင့်ထွက် data နဲ့ HD ဗီဒီယိုပေးပို့နိုင်ပါတယ် ...
အကြွင်းမဲ့အာဏာ Outsourcing ထုတ်လုပ်မှုအိုင်တီခေတ် Hosted န်ဆောင်မှုများပေးရန်
အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအိမ်သူအိမ်သား Absolute လုံးဝခေတ်မယ့်ဧည့်ခံန်ဆောင်မှုမှ၎င်း၏ပိုလန်လမ်းရုံးများအနေဖြင့်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုအိုင်တီလိုအပ်ချက်များကိုအနေနဲ့ Outsourcing ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးအရေးပါသောစက်မှုလုပ်ငန်းထူထောင်ခဲ့သည်။ တစ်ဝန်ဆောင်မှုသဘောတူညီချက် (IaaS) အဖြစ်ရရှိလာတဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံပါဝါစားသုံးမှုနှင့်အာကာသပေါ်ချွေတာ, Absolute မှမျိုးစုံအကျိုးကျေးဇူးများကိုအပ်နှင်းပါလိမ့်မယ် - Soho အတွက်ပရီမီယံမှာနှစ်ဦးစလုံး - နီးပါးလက်ငင်းနှင့်အတူကပေးစဉ် ...
10 ၏စာမျက်နှာ 16«ပထမဦးစွာ...«89101112 » ...နောက်ဆုံး»